Guddiyada & Fursadaha Tabaruca - Dugsiyada Robbinsdale Area
Waad ku mahadsantahay xiisaha aad u hayso inaad la wadaagto waqtigaaga iyo awoodaada ardaydayada iyo bulshadayada! Waxaan haynaa siyaabo badan oo aan uga qayb qaadan karno. Qaar ka mid ah guddiyada iyo fursadaha iskaa wax u qabso waxay si fudud u raadinayaan dad qiiro leh oo doonaya inay ku lug yeeshaan, halka kuwa kale ay leeyihiin sharciyo u baahan khibrad / khibrad dheeraad ah iyo oggolaansho xubnaha hadda jooga. Haddii aad dan gaar ah leedahay ama aad rabto inaad ku biirto guddi, fadlan la xiriir guddoomiyaha guddiga ama qofka lala xiriirayo.
Shaxda Qaabdhismeedka Guddiga
Guddiga La-talinta Waalidiinta Hindida Mareykanka (AIPAC)
Guddiga Iskuxirka Bulshada
Barnaamijka Qorsheynta Farshaxanka dhameystiran (CAPP)
Golaha La-talinta Maaliyadeed (FAC)
Guddiga La-Talinta Hibo & Hibo Leh
Golaha Iskuulka (ISC)
Isbahaysiga Waxqabadka Sharci-dejinta (LAC)
Golaha La-talinta Waxbarashada Gaarka ah (SEAC)
Waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah ardayda Hindida Mareykanka ah waxaa lagu casuumayaa inay ka mid noqdaan Dugsiyada La-talinta Waalidiinta Hindida Mareykanka ah ee loo yaqaan Robininsdale Area Schools (AIPAC).
AIPAC waxay u shaqeysaa inay hubiso in ardayda Hindida Mareykanka ah ay helayaan fursado dhaqan ahaan ku habboon oo sinnaan ah markay tahay waxbarashadooda iyo guusha ay ka gaaraan Dugsiyada Aagga Robbinsdale.
Kulamadu waxay noqon doonaan kuwa iswadayaal sanad dugsiyeedka 2020-2021. Xiriirinta kulanka waxaa lagu dhajin doonaa websaydhka degmada: rdale.org/calendar
Kulamada waxaa la qaban doonaa 4 ilaa 5 galabnimo taariikhahan:
Talaado, Nov. 17, 2020
Talaado, Dec. 15, 2020
Talaado, Janaayo 19, 2021
Talaado, Febraayo 16, 2021
Talaado, Abriil 13, 2021
Talaado, May 11, 2021
Wixii macluumaad dheeraad ah ama su'aalo ah ee ku saabsan shirarka AIPAC, fadlan emayl ugu dir kooxda Robbinsdale American Indian Education ee: Randy_Gresczyk@rdale.org
Isku xidhka bulshada waa guddi joogta ah oo ka tirsan Aaga Dugsiga Degmada Robbinsdale iyo Gudiga Dugsiga. Guddigu badanaa wuxuu kulmaa illaa lix jeer sanadkiiba. Waqtiga kulanka caadiga waa 5 galabnimo ilaa 6:30 galabnimo
Kharashka guddiga isku xidhka bulshada ayaa ah inay u soo jeediyaan Golaha Dugsiga iyo maamulka degmada ka-qaybgalka is-dhexgalka iyo dhacdooyinka taageeraya Himilada Midaysan ee Degmada (UDV).
Baadhitaanka Isku xidhka Bulshada wuxuu bilaabayaa wada hadallada bulshada ee dhisaya xiriirrada lala yeelanayo dhagaystayaasha la beegsanayo:
Hubso guusha ardayga
La xiriir qoysaska, waalidiinta, iyo dadka ardayda masuulka ka ah
Kordhi wacyigelinta waxtarka waxbarashada kahor-12
Kaqeybgal xubnaha bulshada sida dadka degmada deggan iyo ganacsiyada
Dhiirrigelinta isku xirnaanta bulshada ee wanaagsan
In la kobciyo taageerada wadajirka ah ee degmada iyo bulshada ay u adeegto
La wadaag farriimaha muhiimka ah ee degmada
Xubinnimadu waxay ka kooban tahay xubnaha guddiga dugsiga, Agaasimaha Suuqgeynta & Isgaarsiinta, Achievement & Integration Director Director, Agaasimaha Waxbarashada Bulshada iyo ilaa shan xubnood oo bulshada ah.
Xubin ka tirsan guddiga dugsiga ayaa loo qoondeyn doonaa gudoomiye, kaasoo diyaarin doona ajandaha kulan kasta oo ku saleysan fikradaha xubnaha guddiga. Kursigu wuxuu mas'uul ka noqon doonaa qaybinta ajandaha iyo kulammada soo koobidda oo ay ku jiraan qodobbada waxqabadka. Qalabka kulanka waxaa ilaalin doona Kaaliyaha Maamulka ee Maamulka Iskuulka.
Himilooyinka Midaysan ee Himilada Degmooyinka oo ay isku xirnaanayaan mas'uuliyadda Guddiga Isku Xidhka Bulshada:
Himilada 1aad: Hirgelinta Nidaamyada iyo Hab-dhaqannada u furaya Waddooyinka Tacliinta Sare ee Ardayda oo idil
Himilada 3aad: Ka Qaybgal Qoysaska iyo Xubnaha Bulshada Wada-hawlgalayaal ahaan
David Boone, Guddoomiyaha Golaha Dugsiga
Macluumaadka Teleconference waxaa lagu dhajin doonaa kalandarka degmada .
Ogosto 11, 2020
Diisambar 8, 2020
Febraayo 9, 2021
Abriil 13, 2021 - dib ayaa loo dhigay ilaa 4-ta May, 2021!
Juun 8, 2021
Ajendayaal & Qoraal Kooban
Ogast 11, 2020
februar y 9, 2021
Maajo 4, 2021
Golaha La-talinta Waxbarashada Bulshada waxaa amraya sharciga Minnesota wuxuuna u adeegaa inuu kala taliyo Maamulka iyo Guddiga Waxbarashada wixii ku saabsan arrimaha la xiriira Waxbarashada Bulshada iyo adeegyada bulshada.
Goluhu wuxuu u shaqeeyaa sida isku xiraha bulshada iyo degmada si loo qiimeeyo baahiyaha Waxbarshada Bulshada iyo bixinta talo si kor loogu qaado loona kobciyo barnaamijyo cusub.
Xubnuhu waxay la taliyaan, hagaan, u doodaan oo u adeegaan sidii danjireyaal horumarinta iyo gaarsiinta barnaamijyada Waxbarshada Beesha waxayna u noqdaan fureyaal xiriiriya si ay bulshada ugu xiraan Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale.
Golaha La-talinta wuxuu gacan ka geystaa qaabeynta jihada mustaqbalka ee Waxbarashada Bulshada waxayna siisaa fursado hoggaamineed xubnaha si ay ugu xirmaan heer gobol iyo heer qaran.
Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Bulshada
Oktoobar 26, 2020
Nofeembar 23, 2020
Janaayo 25, 2021
Hadafka Barnaamijka Qorshaynta Farshaxanka Dhammaystiran (CAPP) waa inuu taageero barnaamijyada farshaxanka ee Dugsiyada Robbinsdale Area isagoo u doodaya muhiimada farshaxanka ee dugsiga, kor u qaadista waxbarashada farshaxanka, bilaabida dhacdooyinka farshaxanka iyo iskaashiyada, iyo abuurista fursado kaqeybgalka fanka ee bulshada.
Sannadkii 1985, Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale waxay ka mid ahaayeen degmooyinkii ugu horreeyay ee abaalmarin CAPP laga siiyo guddiga farshaxanka gobolka. Afarta deeqo ee xigay iyo tabarucaada sii socota ee degmada ayaa ka dhigtay Guddiga CAPP joogitaan joogto ah Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale in ka badan 25 sano. Waqtigaas oo dhan, aragtida CAPP waxay ahaatay mid joogto ah: Dhamaan Farshaxanka Ardayda oo dhan.
Himilooyinka guddiga CAPP
Himilada 1aad: U Dhiirrigelinta Waxbarashada Farshaxan ee Dhammaan Ardayda
Himilada 2aad: Isgaarsiinta Doorka Waxbarashada Farshaxanka ee Dugsiyadeenna
Himilada 3aad: In La Xoojiyo Isku Xirka Bulshada ee Fanka
Himilada 4aad: U-doodista Horumarinta Shaqaalaha iyo Taageerada Farshaxanka
Guddiga CAPP wuxuu ka kooban yahay xubnaha bulshada, waalidiinta / masuulada, macallimiinta, xubnaha guddiga iskuulka iyo maamulka degmada. Waxaan guud ahaan ku kulannaa bishii hal mar Xarunta Adeegga Waxbarashada ee 42nd iyo Winnetka ee New Hope. Waxaan had iyo jeer raadineynaa xubno daneynaya xoojinta barnaamijyadeena waxbarashada fanka ee ku dhex yaal Dugsiyada Aagga Robbinsdale.
Haddii aad xiiseyneyso ama aad jeceshahay inaad uga qayb gasho guddiga CAPP si kale, fadlan la xiriir Molly Olson si aad u hesho macluumaad dheeraad ah M olly_Olson@rdale.org ama 763-504-8033.
** Shirarku waxay bilaabmayaan 5:15 pm galabnimo Macluumaadka kulanka waxaa laga heli karaa kalandarka degmada .
Oktoobar 7, 2020 - waa la joojiyay
Janaayo 13, 2020
Abriil 7, 2021
Golaha La-talinta Maaliyadeed ee Dugsiyada Robbinsdale (FAC) wuxuu siiyaa talo maaliyadeed iyo taageero Guddiga Dugsiga iyo Maamulka, oo ay ku jirto qiimeynta xaaladaha dhaqaale ee degmada, horumarinta fikradaha miisaaniyadda mustaqbalka iyo dib u eegista guud ee xaaladda maaliyadeed ee degmada.
Guddiga Dugsiga ee hadda waxaa loo magacaabay xubnaha bulshada FAC ee shaqeeya saddexda sano waxaa ka mid ah: Gregg Fishbein, Earl Hoffman, Lennie Kaufman, Greg Kugler, O. Barry Rogers, Howard Schwartz iyo Terry Swanson. Kormeeraha guud, Khasnajiga Guddiga Dugsiga iyo Agaasimaha Fulinta ee Maaliyadda ayaa iyaguna ka soo qayb gala.
Kulamada waxaa caadi ahaan lagu qabtaa Xarunta Adeegga Waxbarashada (4148 Winnetka Ave N, New Hope, MN, dabaqa saddexaad ee guddiga). Dhammaan kulammada FAC waa u furan yihiin dadweynaha.
** Sannad-dugsiyeedka 2020-2021, shirarka waxaa loo qaban doonaa si guud sababo la xiriira cudurka faafa ee COVID-19. Macluumaadka Teleconference waxaa lagu dhajin doonaa kalandarka degmada .
Maareeyaha Xafiiska Ganacsiga
Luulyo 14, 2020
Nofeembar 10, 2020
Maarso 9, 2021 - dib ayaa loo dhigay
Maarso 23, 2021
Maajo 11, 2021
Macluumaadka Teleconference waxaa lagu dhajin doonaa kalandarka degmada
2020-2021 Ajendayaasha FAC
Julaay 14, 2020 Agenda and Agenda Packet
Nofeembar 10, 2020 Agenda and Agenda Packet
Janaayo 12, 2021 Agenda iyo Agenda Packet
Maarso 23, 2021 Agenda iyo Agenda Packet
2019-2020 Ajendayaasha FAC
Oktoobar 10, 2019 Agenda
Diisambar 9, 2019 Agenda
Janaayo 14, 2020 Ajandaha
Febraayo 11, 2020 Agenda
Maarso 31, 2020 - Waa la joojiyay
Meey 12, 2020 Agenda
Juun 23, 2020 Ajandaha
2020-2021 FAC Daqiiqado
Daqiiqado 14, 2020
Noofembar 12, 2020 Daqiiqado
Janaayo 12, 2021 Daqiiqado
Daqiiqado 23, 2021
2019-2020 Daqiiqadaha FAC
Oktoobar 10, 2019 Daqiiqado
Diisambar 9, 2019 Daqiiqado
Janaayo 14, 2020 Daqiiqado
Febraayo 11, 2020 Daqiiqado
Daqiiqado 12, 2020
Daqiiqado 23, 2020
Shuruucda F AC
Ujeedada waxbarashada hibada iyo hibada leh waa isku-darka barnaamijyada gaarka ah, adeegyada iyo tilmaamaha kaladuwan si dhammaan ardayda ay u gaaraan awooddooda buuxda.
Kulamadu waxay noqon doonaan kuwa iswadayaal sanad dugsiyeedka 2020-2021. Xiriirinta kulanka waxaa lagu dhajin doonaa jadwalka degmada: rdale.org/calendar
Kulamada waxaa la qaban doonaa 5:30 ilaa 6:45 pm galabnimo taariikhahan:
Nofeembar 19, 2020
Febraayo 23, 2021
Abriil 13, 2021
Manhaj & Tacliin
Golaha 'InterSchool Council' (ISC) waa gole u gaar ah wadashaqeynta u dhaxeysa wakiilada waalidiinta, shaqaalaha degmada iyo kooxaha bulshada ee u adeega qoysaska iskuulka ah ee ku nool Robbinsdale Area Schools (RAS). Jawiga iskaashiga ee ay kobcisay ISC wuxuu kobciyaa u-adkaysiga bulshada degmada oo dhan iyo aqoonsiga iyada oo loo marayo is-dhaafsiga fikradda, ka-qaybgalka waalidka iyo ka-qaybgalka shaqaalaha. Kaqeybgalayaasha barnaamijka ISC waxay sahmiyaan su'aalaha iyagoo ujeedadoodu tahay inay fahmaan oo ay wadaagaan macnaha guud iyo aragtida go'aanada la qaatay iyo dhacdooyinka lagu qabtay degmadeena. Golahani wuxuu si toos ah u taageeraa Himilada # 3 ee Aragtida Degmada ee Mideysan iyada oo lala kaashanayo qoysaska iyo xubnaha bulshada sidii wada-hawlgalayaal.
Kulamada ISC waxay siisaa kaqeybgalayaasha fursad ay kuwada xiriiraan, ula wadaagaan wararka, fikradaha, weydiiyaan su'aalaha, una fahmaan horumarada hada socda iyadoo la siinayo fursado horumarineed xirfadeed xubnaha waalidiinta, laga yaabee inay la yeeshaan (iyo) waalidiinta kale. Kulamadu waxay raadinayaan inay siiyaan RAS bandhig-faneed sannadle ah oo faahfaahinaya baahiyaha iyo rabitaanka waalidiinta ee ku saabsan hawlgallada degmada ee sanadlaha ah. Xubinnimada kooxdani waxay u oggolaaneysaa kaqeybgalayaasha fursado ay isbarbar dhigaan (iyo kala duwanaanshaha) dhaqamada udhaxeeya kooxaha waalidiinta iyo taageerayaasha, iyo waliba uruurinta fikradaha cusub. ISC waxay u shaqeysaa inay qabato kala duwanaanta ka jirta guud ahaan RAS. Kulamada waxaa kaqeybgalaya Kormeeraha Kumeelgaarka ah ee degmadeena, Dr. Stephanie Burrage, iyo sidoo kale xubnaha shaqaalaha degmada, wakiilada guddiga iskuulka iyo kuwa kale oo laga yaabo in laga codsado inay soo bandhigaan iyagoo matalaya ururada bulshada. Su'aalaha xubnaha shaqaalaha degmada ama soo-jeediyeyaasha kale waa in horay loogu soo diraa emayl ahaan (ugu yaraan ugu yaraan 3-5 maalmood) sidaa darteed jawaabaha waa la baari karaa oo waa la diyaarin karaa waqtiga kulanka.
Wakiilada ISC waxaa ka mid ah waalidiinta iskuulada gaarka ah, barnaamijyada iyo kooxaha isku xirnaanta ee RAS. Wakiiladan waxay u dhaqmaan sida xiriiriyeyaasha xiriirka ee ka dhexeeya maamulka degmada iyo iskuuladooda, kooxaha, iyo / ama dhiirrigeliyeyaasha. Wakiiladu waxay kaqeybgalaan shirarkooda si ay ula wadaagaan waxyaabaha muhiimka ah ee kulanka waxayna su'aalaha, tabashooyinka iyo waxqabadyada dib ugula soo noqdaan golaha.
Martida ku hadla had iyo jeer waa la casuumaa, iyagoo bixiya macluumaad saameeya dhammaan degmadeena. Martidii hore waxaa ka mid ah shaqaalaha degmada iyo wakiillada Waxbarashada Bulshada, PRISM, African Career Education & Resource, Inc. (ACER, Inc) iyo The Seven Dreams Foundation. Si dhab ah loo aqbalo kala duwanaanshaha ka dhex jira RAS, ISC waxay ku taameysaa inay furto fursado si aan nafteena wax ugu barano dhaqamada badan ee ka dhex jira bulshadeena.
Haddii aad rabto inaad marti ka noqoto kulanka Golaha Dugsiga ee InterSchool, aad rabto inaad noqoto wakiil matalaya dugsigaaga ama urur kobciya (ama kaliya aad rabto inaad dhageysato kulanka), fadlan la xiriir Guddoomiyaha hadda (Aiysha Mustapha) rdaleisc @ gmail.com . Tarjumaano si fudud ayaa loo heli karaa inta lagu jiro kulamada luqadaha qaarkood; codsiyo ayaa loo samayn karaa kuwa aan matalin loona baahan yahay inta lagu jiro kulamada. Fadlan email ugu dir hoggaanka ISC ugu yaraan seddex maalmood kahor kulammada si loo diyaariyo.
Kulamada waxaa badanaa la qabtaa Arbacada labaad ee bil kasta 9:30 ilaa 11:30 am subaxnimo Xarunta Adeegga Waxbarashada (ESC) Boardroom. ESC waxay ku taal geeska 42nd iyo Winnetka Avenue.
Meelaha koritaanka ISC:
Sahmi taariikhaha kale, waqtiyada iyo goobaha si loo kobciyo la jaanqaadka Himilada Wadajirka Waalidka ee Midaysan
Aqoonso Mawduucyada kulanka Billaha ah
Dhiirigelinta iyo wadaagida xafladaha dhaqanka; ka qaybqaado horumarinta dhacdooyinka bulshada.
Bixi qaabka horumarinta xirfadeed ee ISC; ACEs, Aqoonta Dhaqanka, Aqoonyahanada, Naviance iwm.
Baadh barnaamijyada, doorarka iyo masuuliyadaha:
Khabiirada Dhaqanka iyo Cimilada
Miisaaniyadaha waaxyaha iyo yoolalka
Mawduucyada taagan oo khuseeya ka qaybgalka wakiillada
Aiysha Mustapha, Guddoomiye
Maarso 10, 2021
Abriil 14, 2021
Maajo 12, 2021
Juun 9, 2021
Isbahaysiga Waxqabadka Sharci-dejinta Dugsiyada ee Robbinsdale Area (LAC) waa koox aan xisbi ka tirsanayn oo ka kooban waalidiin / masuulayaal, ardayda iyo xubnaha bulshada oo u doodaya sharci taageeraya ardaydayada iyo bulshada. Nagala soo qaybgal shirarka Isbahaysiga Waxqabadka Sharci-dejinta. Khibrad looma baahna, kaliya waa rabitaan ah in isbeddel wanaagsan la sameeyo.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan sida aad uga qayb qaadan karto LAC, emayl ugu dir LAC@rdale.org ama wac 763-504-8028.
Waxbadan ka baro LAC
2021 Platform LAC
Khariidadda Sharci-dejinta ee Degmada 281
2021 Taariikhaha Kulanka
Janawari 19, 2021
Febraayo 16, 2021
Maarso 16, 2021
Abriil 20, 2021
18-kii Maajo, 2021
Nagala soo xiriir baraha bulshada
Lagu wargaliyaa • Dhiso cilaaqaadyo • Isbeddel samee
Waxaan nahay waalidiinta ardayda leh baahiyaha gaarka ah, xirfadlayaasha dugsiga, iyo xubnaha bulshada ee u heellan:
U-doodista barnaamijyo iyo adeegyo tayo sare leh
Kala talinta siyaasadaha waxbarashada gaarka ah, habraacyada & dhaqanka
Caawinta aqoonsiga meelaha horumarinta
Dhiirigelinta wada xiriirka wanaagsan & taageerada
Waxaa jira sababo badan oo loogu biiro SEAC!
Baro sida nidaamka waxbarashada gaarka ahi uga shaqeeyo degmada dugsiga.
Baro macluumaadka & xirfadaha kaa caawin doona inaad u noqoto u-doode wax ku ool ah carruurtaada iyo dadka kale.
La kulan waalidiinta kale, xirfadleyda dugsiga iyo xubnaha bulshada ee leh ujeedooyin isku mid ah.
Wadaagida aragtiyadaada iyo aragtiyahaaga gaarka ah waxay ka caawin doontaa degmada dugsiga inay si wax ku ool ah ula shaqeyso qoysaska & hagaajiso natiijooyinka carruurta.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka mid noqoto SEAC, fadlan buuxi arji.
Codsiga Xubinnimada (Isbaanish)
Janawari 4, 2021
Dhagsii taariikhda si aad u aqriso ajandaha
Waajibaadka Waalidka / Masuulka
Kulamada sida caadiga ah waxaa lagu qabtaa Xarunta Barashada Rajada Cusub, Flex Lab; 8301 47th Ave N, New Hope MN 55428. Haddii aad jeceshahay inaad ka soo qayb gasho kulan, fadlan RSVP u dir Sandra Goettl Sandra_Goettl@rdale.org ama wac 763-504-8075.
Sebtember 16, 2019: Agenda
Oktoobar 28, 2019: Agenda
Diisambar 9, 2019: Agenda
Janaayo 27, 2020: Agenda
Maarso 9, 2020 - Waa la joojiyay
Maajo 11, 2020 - Waxaa loo joojiyay COVID-19 awgood
Golaha La-talinta Waxbarashada Gaarka ah ee Minnesota - Website-ka ay maalgeliso PACER waxaa qeyb ahaan lagu maalgeliyaa deeq ka timid Waaxda Waxbarashada ee Minnesota. Dugsiyada Robbinsdale Area iskuulku ma ansaxiyaan adeegyada ama badeecada ay bixiso kaydkan; waxaa loo bixiyaa si ay ugu sahlanaato qoysaska.